PhotoRec lagu bedelan karo oo la mid ah Software for Windows
> Resource > bedelan karo > PhotoRec lagu bedelan karo oo la mid ah Software for Windows
Haddii aad si qalad ah u tirtirto off sawiro ka your computer, kabsaday iyaga waxay noqon karaan qaar gumaarka ah. Waxaad u baahan tahay barnaamij wanaagsan software in uu yahay awood akhriska xogta tirtiray oo soo kabanaya waxaa ku wadid aad u adag, oo aan yeeleynin dheeraad ah ama overwriting wixii xog ah la joogo. Wixii Windows, waxaa jira barnaamijyo badan oo kala duwan oo ay hadda siiyaan macluumaadka shaqeynayaan dib u soo kabashada, oo iyaga ka mid ah kuwa ugu fiican waa kuwan hoos ku xusan:
PhotoRec duwan oo loogu talagalay Windows 1: Recuva
PhotoRec duwan oo loogu talagalay Windows 2: Photo Recovery
kale PhotoRec for Windows 3: Data Recovery
PhotoRec duwan oo loogu talagalay Windows 4: Dr.Fone ee macruufka
A kale PhotoRec weyn, Recuva kasbatay amaan isagoo aalad fudud kabashada xogta. Recuva awood u kabsaday qoruhu oo dhan, iyo sidoo kale qaabab file qaarkood ku xidhan tahay faahfaahinta. Barnaamijka ayaa laga heli karaa lacag la'aan ah, oo waa la jaan qaada labada Windows iyo Mac. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah sifooyinka muhiimka ah:
- Files kulanka xiisaha leh ka hor inta aadan soo kabsado iyaga.
- qoto ama fursadaha scan deg deg ah laga heli karo.
- Dooro ka qaabab file kala duwan si ay u soo kabsadaan.
- interface waa mid aad u fududahay in la isticmaalo, la sharaxaada habboon tallaabo kasta.
1. Barnaamijka xogta Free
2. Files Falanqeynta baaritaan fudud iyo soo kabashada
3. Data soo kabsaday daqiiqo gudahood
1. Scanning qaadan karaan kuwo in muddo ah
2. Shil oo keeni khasaaray xogta karaa
Wondershare Photo Recovery waa barnaamij weyn oo waa la jaan qaada Windows 8 iyo weliba. Tani waa bedel PhotoRec weyn dadka u baahan barnaamij fudud in la Timaadda ah interface hage user. Halka PhotoRec shaqeeyaa ugu horayn iyada oo terminal ah, Wondershare Photo Recovery u baahan tahay in aad marka hore soo dajiyo barnaamij ka dibna u isticmaali via ay interface u gaar ah, taas oo aad ka jawaabaan iyo fududahay in la isticmaalo. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah sifooyinka muhiimka ah:
- Waxaa soo kaban karto, files music video iyo sidoo kale.
- Tan iyo waa barnaamij bixisay, taageero macaamiisha waa mid aad u wanaagsan.
- sidoo kale la socon X. Mac OS
- shaqo kuma cunaan ku agabyada kombuyuutarka.
- muujiyaa thumbnails sawir iyo u ogolaanaya inaad sida ay doortaan hor sanaanayaa files.
1. Dhammaan noocyada sawiro la soo kabsaday karo
2. Kuu ogolaanayaa inaad ku eegaan files
3. Sidoo kale soo kaban karaa xogta laga kaydinta dibadda
1. Kaliya kabanayso photos, videos iyo audio
The Wondershare Data Recovery barnaamijka waa PhotoRec bedelka aad u fiican, kuwa aan rabin in keyd la terminal ah ay computer. Waxay leedahay interface ah quruxsan fududahay in la isticmaalo iyo yimaado la faahfaahsan Help menu. Uma baahnid in la xirfad leh ugu soo kabashada xogta si ay uga shaqeeyaan barnaamijkan. Halkan waxa ku jira qaababka ugu wanaagsan ee Wondershare Data Recovery:
- Ma awood u kabsanaya in ka badan 550 qaabab file.
- version Trial kuu ogolaanaya in aad ka bogsato 100 MB ee xogta.
- Tan iyo markii ay isticmaasho ay akhriyaan oo kaliya hababka, khatarta ku lug leh waa ay yar tahay.
- Leh 4 hababka soo kabashada kala duwan.
- jaanqaadaan Windows 8.
1. Shaqeeyaa noocyo kala duwan oo qaabab kala duwan
2. Aad iyo fududahay in la rakibo
3. Kaban karto xogta ku daqiiqo
1. WAXBA! Ay shaqo wax ku ool ah ma
Dr.Fone Ee macruufka
Wondershare Ayaa Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) waxay bixisaa bedel PhotoRec ah, jidaynayey isticmaala inuu ka soo kabsado faylasha sida videos, sawiro, xiriirada, fariimaha, iyo ka badan, ka iDevice. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah sifooyinka ugu sareeya:
- Socon kara oo dhan iDevices ugu danbeeyay kor of 3GS iPhone.
- gurmad Data waa si dhakhso ah.
- Ladnaansho 14 nooc oo ah xogta la tirtiro iyada oo aan xitaa lagu gurmad Lugood.
1. Helay xogta iPhone tirtiray daqiiqo
2. Macdan karaa hayaan sidoo
1. Kaliya shaqeeya qalabka macruufka.
Top 3 iPhone shawladda kaabta for Windows iyo Mac
List lagu badalan karo Winamp
Hel Free lagu bedelan karo Photoshop iyo raaxaysta Photo Faalladaada
VLC lagu bedelan karo - 10 Players ka fiican yahay VLC
Top 10 Linux lagu bedelan karo Adobe jilitaankii
Media Cope u Mac Alternative: An All-in-Mid ka mid ah sida dhaqsaha badan, oo isu Video Converter
Bender Converter Alternative: A dhakhso All-in-One Video Converter
Best Factory qaab kale: More Mishiinkan, qaabab More, Beddelaan si dhakhso ah
Hel Best Zamzar Alternative
CopyTrans Alternative in Mavericks: Maamul Xogta iPhone / iPad / iPod taabashada
Windows Kan sameeyey Movie Alternative: ka fiican yahay Windows Movie Kan sameeyey,